भारतविरुद्धको सिरिजका लागि वेस्ट इन्डिजद्वारा टोली घोषणा, को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
भारतविरुद्धको सिरिजका लागि वेस्ट इन्डिजद्वारा टोली घोषणा, को–कोले पाए मौका?
काठमाडौं, साउन १० । भारत विरुद्धको तीन खेलको एकदिवसीय सिरिजका लागि वेस्ट इन्डिजले १४ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ । टिममा क्रिस गेललाई पनि मौका दिइएको छ । उनलाई भारत विरुद्धको टि–२० सिरिजका लागि मौका दिइएको थिएन ।
यस्तै जन क्याम्पबेल, रोस्टन चेज, किपो पउल टिममा फर्किएका छन् । सुनील एम्ब्रिस, ड्यारेन ब्रावो, सेनन ग्राबियल र एश्ले नर्सले भने यो पटक टिमा मौका पाउन असफल भएका छन् । भारतविरुद्धको एकदिवसीय सिरिज ८ अक्टोबरदेखि सुरु हुनेछ । भारत विरुद्ध सिरिजका लागि वेस्ट इन्डिजले शुक्रबार घोषणा गरेको टिममा कोकोले पाए मौका? हेर्नुस्–
याे पनि पढ्नुस टी–२० सिरिजः कप्तान कोहली चम्किँदा वेस्ट इन्डिजमाथि भारतको शानदार जित
वानडे सिरिजका लागि वेस्ट इन्डिजको टिमः जेसन होल्डर (कप्तान), क्रिस गेल, जन क्याम्बेल, इभन लुइस, शिमरोन हिटमायर, निकोलस पूरन, रोस्टन चेज, फेबियन एलेन, कार्लोस ब्रेथवेट, कीमो पल, शेल्डन कोट्रेल, ओशेन थमस, शाई होप र केमार रोच।
वान डेका लागि भारतकाे टिमः विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनिष पाण्डे, ऋषभ पन्त, कुणाल पाण्ड्या, रविन्द्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेन्द्र चहल, केदार जाधव, मोहम्मद सामी, भुवनेश्वर कुमार, खलिल अहमद, नवदीप सैनी ।
याे पनि पढ्नुस अन्तिम सिरिज खेल्दै गेल, पूरा गर्लान् यो कीर्तिमान?
ट्याग्स: भारत भर्सेस वेस्ट इन्डिज, वानडे सिरिज